Esory ny ao ambadiky ny sary an-tserasera: programa hanamorana azy | Famoronana an-tserasera
Betsaka ireo izay mitady sary, rehefa avy naka sary ny fomba fanesorana ny mombamomba azy amin'ny sary an-tseraseraNa satria nisy zavatra mivoaka izay tsy tian'izy ireo, satria mila mamafa ny ampahany sasany izy ireo, na satria te-hitady ireo singa ao amin'ny sary amin'ny toerana hafa.
Na inona na inona tranga misy anao dia tokony ho fantatrao fa misy fomba maro hanatanterahana izany, ary mora ihany ny fanatrarana azy. Saingy mila manana fiheverana kely ianao alohan'ny hanatanterahana azy. Noho izany, eto dia hanome anao fitaovana virtoaly vitsivitsy izahay mba hialana amin'ny laoniny ny sary an-tserasera (sy maimaim-poana). Handeha ho amin'izany ve isika?
1 Maninona no esorina amin'ny sary ny sary
2 Webs hanesorana ny mombamomba ny sary an-tserasera
2.3 Clipping Magic
2.7 Faha-Latina Eraser
Maninona no esorina amin'ny sary ny sary
Alao an-tsaina hoe vao avy nanao sary tsara tarehy ianao. Ary ity, arakaraky ny handaminana azy, dia azo ampiasaina hametrahana azy amin'ny faritra nanaovanao azy, fa koa amin'ny faritra hafa, toy ny firenena hafa, tsangambato sns. Zavatra manelingelina, tsipika ao ambadiky ny sary, na koa ireo olona manao fihetsika tsy tianao (na tsy mandoko ny sary). Izay rehetra azo esorina, na dia hiankina amin'ny tianao esorina ny mombamomba na zavatra iray monja.
Raha ny tena izy dia misy antony maro hanesorana ny sary avy amin'ny sary, ary na dia sarotra aza ny nanatrarana azy teo aloha, dia tsy izany no izy ankehitriny. Betsaka ireo fitaovana azo ampiasaina nefa tsy manana hevitra fanovana sary ary izany, afaka segondra vitsy dia mamerina ilay sary tsy misy ambadika. Hiresaka momba azy ireo ve isika?
Webs hanesorana ny mombamomba ny sary an-tserasera
Raha manana ny sary ianao dia fotoana tokony hanombohantsika miasa amin'ny tranokala sasantsasany izay hanampy anao hahazo an'io sary io tsy misy ambadika. Satria pejy web izy ireo dia azonao atao ny miasa amin'ny sary na amin'ny PC-nao na amin'ny findainao. Izany hoe tsy mila manana solosaina ianao vao afaka manao izany, fa avy hatrany amin'ny findainao no ahafahanao miasa miaraka aminy.
Manomboka amin'ny tranokala malaza izahay ary, raha ny filazan'ny manam-pahaizana, iray amin'ireo tsara indrindra azonao ampiasaina. Raha vantany vao manana ilay sary nakarina ianao dia tsy mila mampiasa ilay borosy fotsiny mba hilazana azy hoe iza ireo singa tianao hamafana ary dia izay. Tsotra toy izany.
Ankehitriny, hiasa miaraka amin'ilay fitaovana, indrindra raha tsy maintsy atao fafao ny faritra manakaiky zavatra na olona fa te hiala ianao, tsara kokoa ny mampiasa ny solosaina hahafahana manantona ny sary fa tsy manapaka izay tokony sisa tavela.
Ity fitaovana ity dia haavo mandroso kokoa amin'ny fanovana sary, ary mitovy amin'ny Photoshop, fa maimaim-poana. Ho an'ny maro, Pixlr no pejy an-tserasera tsara indrindra hanovana sary. Saingy manana olana izy ary mila fahalalana kely indrindra mba hiasa tsara miaraka aminy (raha tsy izany dia ho very ianao).
Raha ny fomba fanaovany azy, ny marina dia izay ny asany dia mitovy amin'ny Photoshop, ka raha hainao ny manao azy ao anaty programa dia azonao atao mora foana izany.
Mazava ho azy, rehefa mila miasa lalindalina kokoa ianao dia tsara kokoa ny manao azy amin'ny solosaina.
Ity fitaovana ity dia manana faharanitan-tsaina artifisialy, izany hoe, raha vao mampakatra ny sary ianao, dia hiezaka ny hanafoana ny fiavian'ilay sary ho azy samirery, amin'ny fomba iray segondra, dia ho azonao ny sary tany am-boalohany sy ny vokany miaraka ambadika mangarahara. Inona no tsy tsara? Aza matahotra fa manome andian-dahatsoratra fitaovana hanenenana ny sary nohetezana, hanadiovana azy ary hahatonga azy io ho tonga lafatra rehefa manala ny ao ambadika amin'ny sary an-tserasera.
Saingy manana olana izy, ary izany dia ny valiny no homena anao ny valiny, ary raha tsy tianao hipoitra izany dia mila mandoa drafitra ianao.
Tsy te handoa vola ianao ary mila fitaovana afaka 100%? Ity dia iray amin'ireo safidy, izay miasa ihany koa amin'ny fomba mitovy amin'ny teo aloha, miaraka amin'ny valiny mitovy amin'izany.
Tsy mila mampakatra ilay sary eo amin'ny pejy, ankavia fotsiny ianao, ary amin'ny fitaovana omeny anao dia tsy maintsy araho ny drafitry ny zavatra rehetra tianao hijanona. Raha vantany vao vita ianao dia hanome bokotra maitso izay hanamarihanao ny faritra tianao tazomina ary bokotra mena hamafana izay tsy tianao. Mila mamely an'i Convert fotsiny ianao hahazoana ny valiny.
Amin'ity tranga ity, ity fitaovana an-tserasera ity dia iray amin'ireo tsara indrindra, indrindra satria manana tutorial izay mitarika anao tsikelikely ianao. Azo ampiasaina amin'ny Windows, Mac ary iOS izy io ary mila fotsiny ianao mampakatra ny sary ary avelao ny tenany hanao ny asa, satria ho azy ny valiny (avy eo azonao atao ny miasa mba hahatonga azy io ho tonga lafatra).
Ny lafy ratsy fotsiny dia, raha mila ny sarin'ny kalitao avo lenta ianao dia tsy maintsy mandoa vola, fa ny ambiny amin'ireo toetra dia mamela anao hampidina azy ireo maimaim-poana.
Andao handeha miaraka amin'ny fitaovana iray hafa hanesorana mora foana ny faran'ny sary. Mba hanaovana izany dia mila manao fotsiny ianao apetraho ny tany am-boalohany ary, ao anatin'ny segondra, hiseho ilay sary tsy misy fiaviana.
Talohan'ny namerana ny fitaovana tamin'ny tarehy fotsiny, fa ankehitriny dia mamela anao hampiasa azy io ho an'ny biby, zavatra, olona, ​​sns. tsy manimba zavatra. ary ny zavatra tsara indrindra dia tsara ny valiny.
Ity rindranasa ity, ho an'ny Android ihany, dia hamela anao hanala mora foana ny aoriana. Mila tsindrio fotsiny izay tianao hamafa ary ny fampiharana dia hikarakara ny fiasana ny faritra mba ho tsara araka izay azo atao. A) Ie hahazo sary misy ambadika mangarahara ianao amin'izay ianao afaka mampiasa azy amin'izay tianao.
Raha vantany vao azonao ny valiny, dia mamela anao hamaritra ny valiny, fa koa ny fanesorana amin'ny tanana.
Amin'ity tranga ity dia mampitandrina anao izahay fa tsy fampiharana maimaimpoana izany fa 2 euro ny vidiny. Saingy mety mendrika izany satria io no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra hanalana ny mombamomba ny sary an-tserasera, amin'ity tranga ity amin'ny alàlan'ny findainao.
Hita amin'ny Android sy iOS izy io ary afaka mamafa ny ao ambadika, nefa koa ireo zavatra izay misy fiatraikany ratsy amin'ny sarinao. na dia ahafahanao mampiditra ambadika ao amin'ny galerianao hanao ny asa fanitsiana feno.
Betsaka ny fitaovana an-tserasera hanaisotra ny lamina amin'ny sary. Afaka manoro hevitra anay bebe kokoa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Esory ny sary aorina amin'ny sary an-tserasera